မြန်မာပြည်တွင် ရောဂါကပ်ဆိုးပြန့်ပွားမှာစိုး၍ ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ကောင်းကင်မှ ဆရာတော်ကြီးများ ပရိပ်ရေများပတ်ဖြန်း …. – ShwePyiAye
မြန်မာပြည်တွင် ရောဂါကပ်ဆိုးပြန့်ပွားမှာစိုး၍ ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ကောင်းကင်မှ ဆရာတော်ကြီးများ ပရိပ်ရေများပတ်ဖြန်း ….
By EditorPosted on March 17, 2020
မြန်မာပြည်တွင် ရောဂါကပ်ဆိုးပြန့်ပွားမှာစိုး၍ ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ကောင်းကင်မှ ဆရာတော်ကြီးများ ပရိပ်ရေများပတ်ဖြန်း
အောက်ဆုံးတွင်Videoပါရှိပါသည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မတ် ၁၅ ရက်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၁၉၀ ဦး ရှိကြောင်း ကြေညာရာ တစ်ရက်တည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကနဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရတော့ အခု ကူးစက်တဲ့သူ တော်တော်များများဟာ ဂျာမတ်ဆရီပီတဲလင်း ဗလီက ဘာသာရေးအခမ်းအနား လူထုစုရုံးပွဲကနေ ကူးစက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒါတက်ဆာရီဘာဘာက ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မတ် ၁၄ ရက်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၇၇ ဦး ရှိပြီး ယင်း ဖြစ်ပွားမှုသည် ဆီလန်ဂေါအရပ်ရှိ ဗလီတစ်ခုက ဘာသာရေးအခမ်းအနားနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါ ဘာသာရေးအခမ်းအနား လူထုစုရုံးပွဲသို့ နိုင်ငံအချို့မှ လူ ၁၆၀၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခု အသစ် ကူးစက်သူများနှင့်ဆိုလျှင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူပေါင်းမှာ ၄၂၈ ဦးအထိ ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ထိုဦးရေတွင် ၄၂ ဦးက ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားနိုင်ပြီဖြစ်ကာ လူနာကိုးဦးမှာ အခြေအနေ စိုးရိမ်ရ၍ အထူးကြပ်မတ် စောင့်ကြည့်နေရသည်။ ယခု အသစ်ကူးစက်သူ ၁၉၀ နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက မထုတ်ပြန်သော်လည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်မှ မတ် ၁ ရက်အထိ ပြုလုပ်သော ဘာသာရေးစုရုံးပွဲမှ အများဆုံး ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုပွဲသို့ တက်ရောက်သည့် မလေးရှားနိုင်ငံသား ၁၄၅၀၀၀ ရှိမည့်ဟု အာဏာပိုင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။
ထို တက်ရောက်ခဲ့သူများအား ခြေရာကောက် ဆက်သွယ်လျက် ရှိသည်။
credit စိုင်း ခွန် နောင်
Previous post မလေးရှား၌ တစ်ရက်တည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၁၉၀ ရှိ၊ အများစုက ဗလီမှ ကူးစက်ခြင်း ဖြစ်
Next post နှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ ခုလိုမိသားစုလေးဖြစ်ဖို့ရပ်တည်ကြိုးစားခဲ့ရတာတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဆုပန်ထွာ